TIIR LA TEBEY: Goorma ayuu garoomada kusoo laabanayaa Suso? – Gool FM
(Milano) 03 Abriil 2017 – Garab-weerarka kooxda AC Milan ee Suso ayaa lagu wadaa inuu berriba kusoo laabto tababarka Milanello, isagoo kasoo kabtay dhaawac muruqa ah.
Laacibkan Spanish-ka ah ayaa garoonka laga saaray kaddib 35 daqiiqo kulankii ay 3-1 uga badiyeen Chievo Maarso 4-teedii, isagoo ilaa xilligaa Milan ka maqnaa.
Yeelkeede, Tuttomercatoweb ayaa haatan werinaya war ay ku diirsan doonaan taageerayaasha Milan, iyagoo sheegaya inuu berri kusoo noqon doono tababarka, taasoo ka dhigan inuu u diyaar noqon karo kulanka Palermo ee Axadda, iyo sidoo kale kulanka Sabtiga 14-ka Abriil ee Derby della Madonnina.
Suso ayaa laba gool ka dhaliyay ciyaartii Derby Milano lugtiisii hore kaasoo ku dhamaaday 2-2 ay Nerazzurri gadaal ugasoo laabatay, iyadoo uu 23-jirkani xubin muhim ah ka ahaa kooxda Vincenzo Montella oo uu 6 goolna u dhaliyay 7 goolna u dhigay.
Rodrigo Bentancur oo caafimaadka u maray kooxda Juventus + Sawirro